Bogga ugu weyn 30 Fikradaha Sanad -guurada Jaceylka ee Saaxiibkaaga
Fikradaha Sanad -guurada Jaceylka ee Wiilkaaga Saaxiibka ah
Xiriirrada waxaa ka buuxa kor iyo hoos qaar badanna ma socdaan wax ka badan toddobaad. Haddii kuwaagu ay socdeen ilaa hal sano, labadiinuba waxaad samaynaysay waxyaalo sax ah waxayna ku baaqaysaa dabbaaldeg. Laakiin maahan nooc kasta oo dabbaaldeg ah - dabbaaldeg jaceyl ah! Aynu ku tusno fikradaha sannad -guurada jacaylka ugu fiican iyo hadiyadaha saaxiibkaa.
Fikradaha Sanad -guurada Jaceylka ee Saaxiibkaaga
Waa kuwan qaar ka mid ah fikradaha sannad -guurada jaceylka ah ee aad u sameyn kartid saaxiibka iyo hadiyado aad isaga ugu hesho:
Bilow dabaaldeggaaga goor hore.
Ku raaxayso midba midka kale marka aad wada qubeysanaysaan jaceyl.
Gurigaaga u rogo qolka duugista DIY.
Hel ABC's of Us.
Qor warqad jaceyl oo jaceyl ah.
Samee lama filaan.
Taariikhdaada hore dib u wada samee.
Dhiiri gali noloshaada galmada adiga oo isku dayaya jagooyin kala duwan.
Huteel ku qor habeen.
La yaab saaxiibkaa cunto jaceyl oo labo ah.
Hel tigidhada Dhacdada.
Si wada jir ah u kaam
Waqti tayo leh wada qaata sida lammaane ahaan.
Ku raaxayso waayo -aragnimo cusub oo xiiso leh.
Samee hawlo aanad caadi ahaan gurigaaga ku samayn.
Ku qurxin gaadhiga saaxiibkaa.
U samee wicitaan la yaab leh oo raadiyaha ah.
Wada raaxeysta qorrax -dhaca quruxda badan
Qorshee usbuuc gaar ah oo ka fog guriga.
#1 Bilaw dabaaldeggaaga goor hore
Kani waa yaab iyo ka yaabis sannad -guurada ka soo wareegtay saaxiibkaa, gaar ahaan haddii ay tahay inuu hore u soo shaqo tago.
Habeenka ka horreeya maalinta weyn, diyaarso quraac afka lagu waraabiyo waqti ka hor-waxaa laga yaabaa in macmacaan ama miro leh shaambad. Kadib maalintaada gaarka ah, goor hore kac oo wada bax si aad u aragto qorrax soo bax ka hor intaadan ku raaxaysan cuntada aroorta hore ee jaceylka ah oo lammaane ah.
Si kastaba ha noqotee, haddii bilowga hore ee bilowga maalinta uusan ku soo jiidan, waxaad isku dayi kartaa inaad sariirta ku beddesho beddelkeeda. Haa!
Waqtigaaga wada qaata si aad u nasataan, isu qaboojisaan, oo wakhti u qaadataan si dhab ah u wada hadashaan; kaliya ku raaxayso midba midka kale isbadal. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaad go'aansato inaad saaxibkaaga ula dhaqanto quraac gaar ah oo sariirta saaran, oo aad koolkooliso oo u oggolaato inuu seexdo.
Haddii aad isaga u haysato hadiyad sannad -guureed, waxaad dhigi kartaa barkinta hoosteeda (ama meel kasta oo la doorto) marka uu musqusha aado.
#2 Ku raaxayso midba midka kale marka aad wada qubeysaneysaan jaceylka
Waxaad wada qaadan kartaan jaceylka jaceylka (shumaca haddii aad rabto). Isticmaal qubeyska xumbo raaxo leh iyo alaabta dhaqidda jirka oo leh caraf aad u qurux badan, oo ku raaxayso galaas shaambad ama khamri inta aad ku wada nasanayso biyaha diirran.
Si kasta oo aad u dooratay ha noqoto mid dareen leh, ha ahaato inaad midba midka kale iska mayrto timaha, ku duugto gel -maydhashada dhabarkiisa, ama wax kale oo jidh ahaaneed.
#3 Gurigaaga u rogo qolka duugista DIY
Qolkaaga jiifka ayaa ah meesha ugu habboon qolka duugista DIY. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad shiddo xoogaa shumacyo udgoon ah, iftiimiso nalalka, shiddo muusikada nasashada leh, oo aad ka soo baxdo saliidaha duugista leh ee raaxada leh si aad ugu daaweyso saaxiibkaaga hadiyadaha daweynta raaxada leh ee raaxada leh ee raaxada gurigaaga .
#4 Samee adigat
Waxay u ekaan kartaa doqonnimo, laakiin waa hal dariiqo oo aad kula raaxaysan karto sannad -guuradaada. Waxaad aragtaa, mararka qaarkood waxaad iloobi kartaa sida aad ugu raaxaysatay dhunkashada lamaanahaaga markii ugu horreysay ee aad wada joogteen. Sidaa darteed, ku noolow maalmahaas xiisaha leh ee hore oo leh kal-fadhi jaceyl…
#5 Hel ABC's ee Anaga
Kani waa buug xusuusta waqtigaaga oo ay weheliso qoraal jacayl oo gaar ah oo dheeri ah oo dhan hal. ABC-da annaga ayaa ah hadiyad madadaalo leh in la abuuro iyo mid ka mid ah fikradaha sannad-guuradii ugu dambeysay ee ugu habboonayd.
#6 Tag filimada
Waxaad qorsheyn kartaa inaad aaddo filimada, laakiin ha aadin si aad u daawato shaashadda. Qosol, sax?
Waa kan qorshaha…
Dooro filim (doorbidaya kan muddo tiyaatarada ku jiray) waqti ka baxsan. Haddii aad nasiib leedahay, waxaad ogaan doontaa inaad keligaa tahay baaritaanka. Hadda, labadiinaba waad ku raaxeysan kartaan asturnaanta shaneemo guri oo dalwad ah halkaas oo aad gacmaha is -qabsan kartaan, dhunkadaan oo aad ku raaxeysan kartaan filimka sidaad adigu iska leedahay.
Laakiin haddii aad u aadid filimada ma aha wax adiga kuu gaar ah, maxaad u yeelan weyday habeenkii filimka guriga? Kaliya soo qaado wax aad labadiinuba ku raaxaysan doontaan, laga yaabee majaajilo madadaalo leh, oo aad isla soo baxdaan.
#7 Qor warqad jaceyl oo jaceyl ah
Ha qorin warqad jaceyl oo jaceyl ah! Qor oo ku qari meel gurigaaga ka mid ah oo saaxiibkaa la hubo inuu ka heli doono. Wuxuu la yaabi doonaa oo taaban doonaa fekerkaaga.
#8 Samee lama filaan
Waxa lama filaanka ah mar walba waa jaceyl. Isku day inaad barato sida loogu ciyaaro hees gaar ah qalabka muusikada, baro sida loo sameeyo cunto karis gaar ah, ama aad u qaadato fasal qoob -ka -ciyaarka, ka dibna isaga la yaab xirfadahaaga cusub ee cajiibka ah.
#9 Dib u wada samee taariikhdaada kowaad
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu jaceylka badan ee la sameeyo sanad -guuradaada. Xitaa haddii aad ku nooshahay magaalo ama magaalo kale, weli waad ku sii socon kartaa mawduucyada la midka ah waxaadna ku noolaan kartaa isla hawlihii aad ku raaxaysatay maalintaas.
Haddaba sidee ku qaadatay fiidkii hore?
Waxaad dib u soo ceshan kartaa xiisaha iyo xiisaha daqiiqadahaas adoo cunaya cunto dhakhso ah, daawashada filim nacas ah, ama aado toban bowling pin. Si kasta oo aad u isticmaashay taariikhdaada koowaad, waxaad ku kicin kartaa dareen hore oo caadifadeed adiga oo isku halleeya waaya -aragnimo la mid ah.
#10 Dhiiri geli noloshaada galmada adiga oo isku dayaya jagooyin kala duwan
Haddii qaabka adeegayaasha caajiska ah uu noqday mid caadi u ah xiriirkaaga, tani waa wakhti aad ku dhadhamiso nolosha jacaylkaaga. U fiirso kama sutra oo soo hel xoogaa fikrado cusub oo xiiso leh oo ku soo noolaan doona waxyaabaha qolkaaga jiifka ah.
Sidoo kale, isku day inaad galmo ku samayso meel lama filaan ah oo ka duwan. Sii qolka hurdada ee caajiska ah nasasho oo isku day meel yar oo aan caadi ahayn si aad xoogaa xiiso leh ugu keento maalintaada gaarka ah.
#11 Huteel ka ballanso habeen
Uma baahnid inaad baxdo ka fog guriga. Waxaad si fudud qol ugu xafidi kartaa goob maxalli ah (mid taajir ah haddii aad rabto), ka dibna u soo dir martiqaad saaxiibkaa si uu halkaas kugula kulmo. Kahor intuusan imaan, qolka si qurux badan ugu sharrax shumacyo, ubaxyo tufaax ah, iyo qubeys xumbo kulul leh laba.
Iska hubi kuwan 17 kale oo raqiis ah oo lagu beddeli karo huteelada u qalma. | Cusboonaysiinta
#12 La yaab saaxiibkaa cunto jaceyl oo labo ah
Kari cuntada uu jecel yahay, ama diyaarso farxad aan la filayn. Haddii kale, waxaad diyaarin kartaa casho khaas ah oo aad wada raaxaysateen, malaha taariikhdaada kowaad.
#13 Hel tigidhada Dhacdada
Halkii aad ka iibsan lahayd ninkaaga qalab cusub oo isboorti, u soo hel tikidhada si uu u daawado kooxda uu jecel yahay oo ciyaaraya maalintaas ama mustaqbalka dhow. Maalintaas, waxaad isla wada raaxaysan kartaan casho jaceyl oo wanaagsan, waxaad ku qabsan kartaa xoogaa cabitaan ah ciyaarta, oo waxaad ugu farxi kartaa kooxdiisa sidii waalli -maxaa yeelay waxaad tahay lammaane xun oo sidaas ah.
#14 Tag kaamamkar
Haddii aad jeceshahay banaanka weyn, ka dibna xoogaa waqti qaado si aad u wada kaambaysaan. Ku raaxayso mid kasta oo kale oo ka mid ah xiddigaha hoostooda kuna reyreeya ammaanta dabeecadda adiga oo dib u kicinaya xiisahaaga maalintaan gaarka ah.
#15 Waqti tayo leh wada qaata sida lamaane ahaan
Qorsheyso inaad shaqada fasax ka qaadato, iska dhegayso taleefankaaga, oo aad uga tagto emaylkaaga jawaab la'aan. Kaliya ku raaxayso sannad -guuradaada, si fudud u qiimeeya midba midka kale, oo aad mar labaad la xiriirto macnaha dhabta ah ee noloshaada.
#16 Ku raaxayso khibrad cusub oo xiiso leh
U isticmaal sannad -guuradaada fursad aad kula raaxaysato saaxiibkaaga khibrad cusub oo xiiso leh. Haddii labadiinuba aad xiiseyneysaan quudhsiga oo aad u jeceshay xiisaha loolanka, ka dibna isku day inaad samaysato, baraaraysid, ama barafka sida lamaane.
#17 Samee hawlo aanad caadi ahaan gurigaaga ku qaban
Tani uma muuqan karto fikrad sanad guurada jaceylka ah, laakiin saaxiibkaa run ahaantii wuu qaddarin doonaa haddii aad ku dadaasho inaad ka caawiso hawlo aadan sida caadiga ah guriga ka qaban. Waxaad la wareegi kartaa karinta cashada, nadiifinta guriga, ama dhaqidda dharka.
I aamin, saaxiibkaa wuu jeclaan doonaa!
#18 Qurxin gaadhiga saaxiibkaa
Waxaad adeegsan kartaa sumadaha daaqadaha oo waxaad ku qurxin kartaa gaariga saaxiibkaa farriimo jacayl iyo sawirro ama waxaad ku dabooli kartaa ubax hab macaan oo lama filaan ah oo lagu xusayo sannad -guuradaada.
#19 U yeer raadiyaha layaabka leh
U gudub idaacad aad taqaano saaxiibkaa inuu dhegeysto oo ka codso inay u heesaan hees jacayl oo jaceyl gaar ah sannad -guuradaada.
#20 Ku wada raaxeysta qorrax -dhaca quruxda badan
Ku raaxayso qorrax -dhaca quruxda badan si wada jir ah dhammaadka jaceylka maalinta xuskaaga. Waxaad diyaarin kartaa piknik aad u macaan oo ay ka buuxaan dhammaan cuntooyinka iyo cabitaannada aad jeceshahay, oo aad tagto meel adiga kuu gaar ah si aad u qadarinayso quruxda dabiiciga ah.
#21 Qorshee usbuuc gaar ah oo ka fog guriga
Waxaad qabanqaabin kartaa usbuuc khaas ah oo ka baxsan guriga si lama filaan ah lamaanahaaga. Hubi inaad wax walba meel ku haysato si aad labadiinuba ugu booddaan baabuurka oo aad u kaxayn kartaan. Sidoo kale, haddii aad lacag yar tahay, ha ku dhibin ballansashada safar qaali ah oo qalaad. Kaliya qol u dhig B&B oo halkaas u wada soco.
Saaxiibkaa ayaa yaabi doona markaad timaadid meeshaad u socotay.
Fikradaha Hadiyadaha Sanad -guurada Jaceylka ee Saaxiibkaaga
Waa kuwan qaar ka mid ah hadiyadaha sannad -guurada jaceylka ah ee aad u heli kartid saaxiib:
Buugga Jacaylka Shakhsi ahaaneed
Qoraalada Jaceylka Nacnac Sexy
Erayada Jacaylka Qaabka ah
Sideen Ku Jeclahay Joornaalka
Sawir Sawir ah
Waan Ku Jeclahay Jar
Basket Gift Gamer
#22 Buugga Jacaylka Shakhsi ahaaneed
Wax yar ha degin; jaceylkaagu asal ahaan waa jaceylka buugga sheekada oo u qalma buugiisa, marka hore ka dhig mid hore! Sii hadiyad guuradii gaarka ah ee sheekadaada jaceyl ee shaqsiyeed, si uu marar badan wax u akhriyo!
#23 Qoraalada Jaceylka Nacnac Sexy
Kani waa uber deg deg ah oo fudud oo lagu muujiyo jacaylkaaga. Markaa, u hel qoraallo jacayl nacnac oo jinsi ah.
#24 Erayada Jacaylka Qaabka ah
Tani waa jaceyl iyo hadiyad guuradii la yaab leh! Isku day inaad geliso xoogaa heeso heeso jacayl ah! Ha noqoto heesta jacayl ee uu jecel yahay, laxanka uu qoray, ama dawaynta muusikada oo macnaheedu yahay wax gaar ah, ma khaldmi kartid.
#25 Sideen Ku Jeclahay Joornaalka
Haddii aad jeceshahay inaad jaceyl ku noqoto qoraal ahaan, kani waa adiga. Soo hel saaxiibkaa buugga xusuus -qorka ee quruxda badan oo faahfaahinaya wax kasta oo yar oo aad isaga ka jeceshahay. Xaqiiqdii wuu jeclaan doonaa! Nacasyo.
#26 Sawirka Album
Miyaad haysaa sawirro aad u qurux badan oo la tirin karo? Si fudud u soo ururi oo dhammaantood ku wada dheji album sawir oo aad labadiinuba jeclaan doontaan inaad dib u eegtaan sanadaha oo dhan.
#27 Waan Ku Jeclahay Jar
Marna ma jiraan siyaabo ku filan oo aad ugu sheegto macaankaaga in aad jeceshahay, laakiin halkan waxaa ah hab jaceyl oo aad ku samayn karto - isaga sii “I love you jar”.
#28 Basket Gift Gamer
Haddii saaxiibkaagu yahay khamaarle, markaa si gaar ah ayuu ugu farxi doonaa dambiisha hadiyaddan. Iskuday!
#29 Xarunta Ciyaarta
Saaxiibkaaga kubbadda cagta/kubbadda cagta weligiis wuxuu heli doonaa jaceylkan. Sii isaga xaruntii ugu dambaysay ee ciyaarta - PS5 wuu baxay - ama ciyaartii ugu dambaysay ee fiidiyaha FIFA.
#30 Xirashada Casriga ah
Haddii uu yahay qof jecel moodada ama aan ahayn, tixgeli inaad u hesho xoogaa xirasho aad u fiican. Waxaa laga yaabaa in suudh, surwaal raaxo leh, funaanado, iyo wixii la mid ah ay ku xiran tahay dookhaaga ama kiisa. ''
DatingDivas - Fikradaha Hadiyadaha Sanad -guurada Jaceylka ee uu si buuxda u jeclaan doono
Waarid - Waxyaabaha jaceylka ah iyo kuwa gaarka ah ee lagu sameeyo sanad -guuradaada
Maxlamada - 30 Sanad -guurada Gaarka ah ayaa Hadiyado Siiya Ninkaaga inuu Jeclaado
magalo - 30 Fikradaha Hadiyadaha Sanad -guurada ah ee uu runtii Jeclaan doono
Waxaan rabaa in la i siiyo lacag si aan u guursado ajnabi: 4 shay oo ay tahay inaad had iyo jeer ogaato
10 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siinayo Farriimaha Guys
Goobaha Kirada Fasaxa ee ugu Fiican | Baadh fursadaha
11 Ku Bixi Fursadaha Qoraalka Online
Dib -u -eegista Caymiska Jetty 2021: Caymiska Jetty ma Sharcibaa mise Waa Fadeexad?
Jawaabaha ugu Wanaagsan ee "iga iibso Qalinkan" Su'aasha Wareysiga
Noqoshada iibiyaha waxay ka dhigan tahay in la hoos mariyo rajada si loo fahmo waxa rajadu u baahan tahay. Mid kasta…